Tontosa tetsy amin’ny Carlton Anosy omaly ny fanombohana ny tetikasa fanitarana an’Antananarivo izay hiarahan’ny avy eo anivon’ny kaominin’Antananarivo renivohitra sy ny minisiteran’ny fanajariana ny tany mifarimbona.
KIDNAPPING ANY MALAIMBANDY
Narian’ireo dahalo teny an-dalana ny zanak’ilay mpampianatra fa nentiny nanaraka azy ireo kosa ity farany omaly.
Tovolahy iray izay mpianatr’Ankatso no namoy ny ainy vao maraina omaly tetsy Antohomadinika.
St VINCENT de PAUL AMBATONILITA
Mitohy hatrany ny hetsika fandavan’ireo mpianatra sy ray aman-drenin’ny mpianatra ary maintimolaly nandalo nandranto fianarana teo anivon’ny lisea St Vincent de Paul Ambatonilita ny fanakatonana ity toeram-panabeazana nahavita be tao anatin’ny 120 taona ity. Ny sabotsy teo izy ireo dia nampiaka-peo teny an-toerana indray ary nampahatsiahy fa efa maro ireo olomanga nivoaka avy eo anivon’ny sekoly.
Fatina vehivavy iray tokony ho 32 taona no hita tany Ambatolampy ny faran’ny herinandro teo, kanefa tsy fantatra izay havany.
Efa manomboka simba ny razana, indrindra eo amin’ny faritry ny vavany, izay mamoaka zavatra hafahafa. Napetraka tao amin’ny tranom-patin’ny hopitaly any an-toerana io razana io.
Nodimandry tamin’ny alarobia 7 febroary teo tao Belo Tsiribihina teo amin’ny faha-81 taonany ny mpanjakavavin’ny foko Sakalavan’i Menabe, Kamamy Georgette. Tonga tany an-toerana moa ny iraka avy eo anivon’ny fitondram-panjakana notarihin'ny Talen'ny kabinetran'ny Filoha, Eric Randrasana ny sabotsy teo nitondra ny teny fampiononana ho an’ny foko iray manontolo sy ny fianakavian’ny mpanjaka. Ity mpanjakavavy ity, raha ny fanazavana, no mpitana ny fomban-drazana Sakalavan’i Menabe fony fahavelony. Ny zoma 16 febroary izao no hanatontosana ny fombafomba rehetra amin’ny fanafenana ny masina.
Avo lenta loatra ny sehatra misy ny fakàna an-keriny ny teratany karàna eto Madagasikara. Raha tsy fepetra avo lenta no raisina entina manohitra izany dia ho sasa-poana ny famongorana azy. Ireo fianakaviana izay tsy manaiky fiaraha-miasa amin’ny mpitandro ny filaminana mihitsy no mahatonga ny fakàna an-keriny mbola mirongatra hatramin’izao, hoy i Seth Andriamarohasina, mpikamban’ny CNIDH.
ZAZA VERY KA HITA INDRAY
Very teo amin'ny manodidina ny EKAR katolika Faravohitra ny tovolahy kely roa antsoina hoe Fifaliana sy Iedena. Avy nianatra katesizy izy mirahalahy kely omaly maraina no niandry ny zokiny teo ivelany ka nisy ramatoa voalaza fa nitondra azy. Hita teny amin'ny manodidina ny La city Ivandry izy ireo tokony ho tamin' ny 5 ora sy sasany hariva teo. Nisy zandary roalahy nampandre ny rainy raha nahita ny filazana nisy tamin' ny tambajotran-tserasera facebook.
Efa manomboka misy vokany amin’izay ny fanadihadian’ny zandary momba ny fakàna an-keriny ary nanamora izany ny fametrahana ilay komity iraisan’ny zandary, polisy ary fitsarana. Na izany aza dia olana hatrany ny tsy faneken’ny karàna izay mivondrona eo anivon’ny Cfoim ka mahasarotra ny fanadihadiana, hoy ny talen’ny sampana fanadihadiana, ny Jeneraly Mosesy.
FAKANA AN-KERINY SY MPANAO POLITIKA
Tsy misy hidiran’ny mpanao politika mihitsy, indrindra fa ny mpanohitra, ny fakàna an-keriny. Vola an-tapitrisa Euros no lalaovina ary tsy maintsy olona manana kaonty any ivelany no atidoha mikotrika izany. Ny mpitandro ny filaminana no mila omena fitaovana bebe kokoa ary koa ny olona eny anivon’ny fokontany dia mila entanina mba hanome tanana amin’ny angom-baovao, raha araka ny fijerin’ny solombavambahoaka Brunelle Razafitsiandraofa.
TRAKTA AO ANTSIRABE
Misy trakta miely ao Antsirabe ary manainga ny olona mba hitokona ho fisintonana ny lakolosy fanairana. Tao anatin’izany trakta izany ihany no nahitana fa tsy firaharahian’ny tompon’andraiki-pahefana ny hetahetan’ny olona na dia efa nampitaina mivantana tamin’ny antanatohatra rehetra aza izany, no anton’ilay fikasana hitokona. Ny mponin’i Mahazoarivo Antsirabe no tena nentanin’ilay trakta niely.
Tsy mandray ny andraikiny mihitsy ny mpitandro ny filaminana fa dia mandany ny volan’ny vahoaka fotsiny. Tokony halalahana ny fahazoana mitondra basy ho an’ny olon-tsotra, amin’izay ny rehetra no misahana ny fiarovan-tenany fa tsy hiantehitra amin’ny mpitandro ny filaminana hatrany, ireo farany izay efa tsy mahavita ny asany intsony. Fanehoan-kevitri’i Paolo Raholinarivo, mpanolotsain’ny Praiministra izany.
Lany henatra tanteraka ny fanjakana noho ny fibaribarin’ny endriky ny baranahiny amin’ny fitantanam-bola eto amintsika. Namoahana baiko ny mpiasam-panjakana izay miasa eo anivon’ny minisiteran’ny fitantanam-bolam-panjakana ny mba tsy hamoaka ny tsiambaratelon’ny asa izay kirakirain’izy ireo ary raha misy ny mifanohitra amin’izany dia hitranga ny fanenjehana ny tompon’andraikitra. Anisan’ny fahavalon’ity fitondrana ity ny atao hoe mangarahara.
DISO TSIPELIN’NY PREZIDANSA
Feno tsipelina diso ny fampitam-baovaon’ny prezidansa omaly. Hatramin’ny anaran’ny departemanta nandefa izany aza dia diso koa. Raha tokony ho « direction de la communication » dia lasa « direCON de la communication ». Endriky ny tsy fahamatorana eo anivon’ny fitondrana izany satria ny serasera dia entina hanatsarana ny sarin’ny mpitondra ary toe-javatra kely toy izao dia manome endrika ratsy sy tsy fahamatorana amin’ny asa ao Iavoloha. Tsy voalohany izao tranga izao fa efa matetika.
Tazonina ao amin’ny polisin’ny BC Anosy ireo olona fito izay niray tsikombakomba tamin’ny halatra vatoaratra tao anatin’ny baoritra 615. Nogiazana ihany koa ny kamiao roa nampiasaina nitaterana ireo entana halatra ireo. Tao amin’ny fitoeran’entan’ny orinasa mpamokatra izany no nivoahan’ny entana ary amin’ny alina no atao ny halatra sy ny fitaterana azy. Mety mbola hitombo ny isan’ny olona tafiditra amin’ity raharaha halatra ity.